Shira Duloomaa Afarsuun Garaagrummaa Hin Fidu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsShira Duloomaa Afarsuun Garaagrummaa Hin Fidu!
Damee Boruutin, Bitootessa 15, 2019
Alamuu Simee, namichi Lammaa Magarsaa irraa aangoo fudhachuu fidu, kana.
Shirri guddaan sadarka ol aanatti Qabsoo Bilisummaa Uummata Oromoo irratti humna, dandeettii fi ogummaa nafxanyootaa fi Mootummaa EBRDFiin agamame WBOn injifannoo guutuun irra aanee jira. Shira sana Shira Jaaraa Digdamii Tokkoffaa Uummata Oromoo irratti xaxamaa jiru jedhee gaafa 02/13/2019 barreessama tokko Ayyaantuu irratti baaseen ture. Sana duras yaadoon koo waan jabaa tureef Lama Du’uun Hamaa Dha jedhee gaafa 01/31/2019 waa’ee deemsa Araara maqaa Abbootii Gadaa fi Haadhaa Siiqqee amantii akka hin qabne barreesseen ture.
Yaadoon koo inni duraa araarichi tooftaa diina akka tahe naa galee jira. Ijoolleen harka laatan kun lubbuun dhumuuf akka deeman natti mul’ata. Duuti inni guddaan aadaa Oromoo keessatti bakka guddaa kan qabuuf kan itti boonnu sirna Gadaa Oromoo ti. Sirna Gadaa keessatti dhugaan hin dabu. Jalinaa fi sobaa uummata keessatti hojjechuun laguu akka tahetiin beekama. Maqaa Abbootii Gadaan shira Mootummaan ilmaan Oromoo irratti xaxaa jiru keessaa qooda fudhachuun abaarsa.
Abbaan Gadaa Bayyanaa Sanbatoo bara abbaa gadummaa isaa raawwatee dabrsee jira. Kana keessa galuu hin qabu ture. Garuu lafa Tuullamaa gurgurachuun nama dadalaa ture tahuu isaa yaroo namoota isa beekan irraa dhaga’u baayyeen gadde. Kanaafu hojii salphina kana fakkaatu uummata isaa irratti hojjechuu filate. Jawaarii fi Baqalaan bitamtoota fedhii isaanii guutachuuf WBO diiguuf utaalanii koree tekinkaa kan jedhamu keessa seenan. Uummatni Oromoo hojii isaanii kanaaf dhiifama isaanii gochuu hin qabu.
WBO keessa harka muraasni tokko warra kana amanee warri kaamp galan gaabanii uummata Oromoo itti iyyachaa jiru. Har’a gaabuun isanii gargaaramaa guddaa hin fidu. Uummatni Oromoo akka galama isaanii kana irratti hin hirmaanne beeku. Waan dagatan meeshaa dhiiga ilmaan Oromoon argame diinaaf galchuu fi wabii tokko malee dukkanaan dhokatanii kampii galuu isaanii ti. Kana malee ejjennaa tokkicha walii galteen fudhachuu dhiisanii akka mootummaan barbaadutti jarjartiin kiyyoo diina keessa seenuu isanii ti.
Bakka kam iyyuu haa deeman akka balaan isaan irra gahuu fedha Uummata oromoo miti. Amma lubbuun jirruu fi Oromiyaan harqoota garbummaa jala jirtu bakka deemnu marattti qabsoon nu eegata. Kanaafu amma WBO isaanii gahu obsaan eegachuu malee abdii kutanii sammuu of jeequu hin qaban.” Maa gaabbiin booddee hin tahiini” jedhe jedhan Abishee Garbee quba isaa moggee erga nyaatee fixee.
Shirri duloomaan bara baraan afarsamu keessa tokko yoo ijaarsi Oromoo tokko hin taane qabsoon Uummata Oromoo bakka jirutti uguramuu qaba kan jedhu dha. Namni dandeetti, horii fi yaroo qabu nama yaada isaa hordofu argatee yoo ijaarame rakkina maalii qaba? Garuu qabsoo uummata isaa/uummata ishee dura dhaabbachuu fi itti daldaluuf yoo tahe abaaramuu fi dura dhaabbachuun ni barbaachisa. Ijaarsonni Oromoo har’a jiru jedhan keessa gareen qaama OPDO tahanii jiru. Kaan immoo OPDO wajjin hariroo galanii hojii OPDO hojjechaaf akka jiran waan ifatti agarru.
Ija maaliin madaalameetu har’a ijaarsonni Oromoo akka tokko tahan yaadni dhugaa irraa fagoo tahe dhiyyaachuu danda’a? Gaaffii shira duloomaa kana diinni hojii manaa(homework ) nuuf kennee utuu irratti wal nyaataa yaroo keenya akka gubnuu barbaada. Karaan qabsoo bilisummaa Oromoo akka qorsa barii ganamaa boldogi jedhee ifee jira. Galatni Leencota Oromoo Jaal Goolicha Dheengee fi Jaal Marroo Dirribaaf haa tahu malee Sadarka ol aanatti nuuf ceesisanii jiru. Qarree fi Qeerroon, xiqqaa fi guddaan, Jaarsaa fi Jaartiin, dhiiraa fi dubartiin kan Oromoo tahee lafa jiru, kan biyyaa fi diaspora jiru ijaarsa qabatee qabaachuu baate isaan wajjin hiriira galee qabsoo finiinsuu qabna.
Meeshaa qabnuun eeboo fi mancaa taatu illee gumaachuuf qabna. Qabeenyi keenya qabnu WBO hin qusannu. Nuyi nyaannee WBOn agabuu buluun hin tahu. Gootota keenya mararsiifachuu duwwaa utuu hin taane qanansiifachuus beekuu qabna. Diinni Uummata Oromoo kan taate OPDOn biyyoota olaa kan akka Keeniyaa, Sudaan Kibbaa, Eritrea fi Somaaliyaa akka ishee gargaaranii WBO balleesani daboo kadhachaa jirti. Baamsaa itti marsamaa jiru kana gaarsa uummata isaan wajjin WBOn ciree akka injifannoon bira darbu mamii hin qabu.
Mumichi Ministeera Ginbot 7 (bara kana EPRDF iyyuu ganee jira) Faranaayii Minilkiin qawwe badhaafte akka Uummatni Oromoo cabu kan goote har’as gabrummaa kana dheeressuuf gargaarsa gaafachaa jira. Uummanti keenya shira ilmaan isaa fixanii garbummaa jalatti isa habsuuf godhamu kana hubatee WBO wajjin dhaabbachuu malee filmaata biraa hin qabu. Waraana baayyisuun WBOf meeshaa geessu taha malee faayidaa biraa hin fiduuf.
Ijaarsonni Oromoo dhugaan wal tahuuf warri OPDO wajjin hojjechaa jiran gocha isaanii kana abaaranii akka warra bilisa qaban ABO/SG fi KFO wajjin utuu walii galanii agoobara tokko dhaabbatanii qabsoo bilisummaa Uummata oromoof hidhatama taha. Wabiin qabsoo bilisummaa Ummata Oromoo WBO waan taheef waan qabnu maraan WBO gargaarra. WBOn hoogganamna. Kaayyoo fi akeeka WBO hordofna. Uummatni Oromoo tokko tahee amma WBO wajjin jirutti dubbiin dhume. Tokkummaa Uummata Oromoo namni waakatu yoo jiraate of haa gowwomsu.
Warri ijaarsa barbaadu akka barbaadetti haa ijaaramu. Mirga isa/ mirga ishee ti. Warri Habashaa dhaaba dhiba tokko qabu. Kan Oromoo ni baayyatan yoo jenne kijibaa jirra. Ginbot 7 fi ANM iyyuu biyyaa Oromoo keessa deemanii waajiraa banachaa oolu. Yaroo kana keessa waa’ee tokkummaa ijaarsota Oromoo kaasuun hojii dogogoraa warra oofuu barbaadanii ti. Warri kaayyoo fi akeeka tokko qaban ofii jiraachisuuf jecha wal tahuun dirqama itti taha. Namni wal tahaa jedheef ijaarsi wal tahu hin jiru. Kan tokko nama godhu kaayyoo fi akeeka qofa.